နယူး Dalet Brio သည် SMPTE ST 2110 နှင့် IP သို့ရှင်းလင်းသောလမ်းကြောင်းပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » နယူး Dalet Brio SMPTE ST 2110 နှင့်အတူအိုင်ပီတစ်ခုအုကမ်းမဖက်မြပေး
နယူး Dalet Brio SMPTE ST 2110 နှင့်အတူအိုင်ပီတစ်ခုအုကမ်းမဖက်မြပေး
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - ဇူလိုင်လ 30, 2019 - ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို Dalet တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများရှင်းလင်းစွာလမ်းကြောင်းနှင့်အဘို့အထောက်ခံမှုနှင့်အတူ IP ကိုမှထိန်းချုပ်ထားသောအကူးအပြောင်းသည် SMPTE ယင်း၏ Dalet Brio I / O ပလက်ဖောင်း၏နောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးရန်အတွက် ST 2110 ။ နှစ်ဦးစလုံးထောကျပံ့ SMPTE ST 2110 နှင့် SDI စံ Workflows, high-သိပ်သည်းဆကိုစားသုံးမိခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ပလက်ဖောင်းမီဒီယာအဆောက်အဦဟာသူတို့ရဲ့လက်ရှိစစ်ဆင်ရေးကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏အနာဂတ်အိုင်ပီအခြေခံအဆောက်အအုံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆင့်မြင့်, IP ကို-အဆင်သင့်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေး၏အုတ်မြစ်, Dalet Brio စနစ်များနှင့်ကိရိယာများကိုကျယ်ပြန့်ရန်နှင့်ကနေစားသုံးမိ, လွှဲပြောင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုစီမံခန့်ခွဲကြောင်းအဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အတူသစ်ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးပတ်ဝန်းကျင်မှာမှ adapts ။ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့် IP ကိုထောက်ခံမှုအပါအဝင်အပြိုင်စီးတဲ့ကျယ်ပြန့်လုပ်ဆောင်ပေးရန်အသုံးပြုသူများအဖွ SMPTE ST 2110, linear ချန်နယ်များအတွက် ST 2022-2 နှင့် NDI နှင့် RTMP Facebook မှတိုက်ရိုက်, Youtube နှင့် Twitter ကဲ့သို့အဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းသည်။
"ဟုအဆိုပါ Dalet Brio ထုတ်ကုန်၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုအလွယ်တကူ SDI ရောထွေးနိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့် SMPTE ပိုပြီးအရေးကြီးတာကယုံကြည်မှုနှင့်အတူအပြည့်အဝ IP ကိုကူးပြောင်း ST 2110 Workflows, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာ, "Matthieu Fasani, ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Dalet ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကဖော်ပြသည်။ "မီဒီယာပညာရှင်များ IP ကိုအနာဂတ်မှာကြောင်းကိုငါသိ၏, သေးအများဆုံးစစ်ဆင်ရေးများအတွက်, ကနေ့ချင်းညချင်းအသွင်ပြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျ re-architecting သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုမီဒီယာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များမှာမဟုတ်လျှင်, IP ကိုမှထိန်းချုပ်ထားသောအကူးအပြောင်းကိုအကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာဖြစ်တယ်။ "
Fasani စားသုံးမိခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေးမှသော့ချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သောကြောင့်, အဆင့်မြှင့်တဲ့အခါမှာသတိထားထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည် "ကထပ်ပြောသည်။ Dalet Brio မျိုးဆက်သစ်အိုင်ပီ Workflows များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထောက်ခံမှု SMPTE ST 2110 Workflows သင်စက်မှုလုပ်ငန်းစံတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်မယ့်ကြောင်းအဖြေတစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်နေကြသည်သေချာ, ဧပြီ 2019 အတွက်ကွန်ယက်ကိုမီဒီယာ (JT-မိုင်) တွင်ပူးတွဲ Task Force ကဦးဆောင်ယုံကြည်စိတ်ချအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်မှုများကကျောထောက်နောက်ခံပြုနေကြသည်။ Dalet Brio အနာဂတ်မှာသို့သင့်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေးယူလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါပဲ။ "
ဘရုစ် Devlin, Dalet ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မီဒီယာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် SMPTE အိုင်ပီ Workflows ၏အရေးပါမှုအပေါ်စံချိန်စံညွှန်းများဒုတိယသမ္မတမှတ်ချက်များ, SMPTE ST 2110 တူသောစံချိန်စံညွှန်းများ။ "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာများအတွက် IP ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှရွှေ့ပြောင်းသစ်ကိုတိုက်ရိုက် Workflows များအတွက် key ကိုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အိုင်ပီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ST 2110, အထူးသဖြင့် ပို. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် SDI ပေးနိုင်ထက်စတူဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦများကိုပိုမိုအသုံးချပေးနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်စနစ်များကိုဖန်တီးရန်အတူတကွခံရမည်နိုင်ကြောင်း ST 2110 ကိရိယာတစ်ခုအစဉ်အဆက်-တိုးမြှင့်ဂေဟစနစ်မြင်သည်။ အဆိုပါအိုင်ပီအနာဂတ်ယခုကယ်နှုတ်တော်မူ၏လျက်ရှိသည်နှင့် ST 2110 ပစ္စည်းကိရိယာများက၏စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ "
Dalet Brio အကြောင်း
တစ်ဦးအိုင်တီ-based input ကိုနှင့် output ကိုဗီဒီယိုကပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်, Dalet Brio တစ် Dalet က Galaxy ငါးလုပ်ငန်း-ကျယ်ပြန့်ဖြေရှင်းချက် Third-party ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကို standalone အဖြစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖြစ်စေ, အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာ Workflows ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ထုတ်ကုန်။ Multicam မန်နေဂျာမီဒီယာ Logger မှနှင့်မီဒီယာ Navigator - - applications များ၏ Dalet Brio suite ကိုထုတ်လွှင့် Multi-ကင်မရာထိန်းချုပ်မှု, ပြည့်စုံသစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုကိုစားသုံးမိခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုထည့်သွင်းရန်စွမ်းရည်ချဲ့ထွင်ရန်ခွင့်ပြုကြောင်းရည်ရွယ်ချက်-built tools များဖြစ်ကြသည်။ ဦးဆောင် Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးစက်ရုံ VDM ရန်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထုတ်လွှင့် Euronews, ပြင်သစ်တီဗီ, Fox ကကွန်ယက် Group မှဥရောပနှင့် Mediacorp ထံမှ San Jose ငါးမန်းများကဲ့သို့အထင်ကရအားကစားပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများအားမိမိတို့၏မီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းအကွာအဝေး၏အဓိကမှာ Dalet Brio ထားကြသူ Dalet ဖောက်သည်။
Dalet Brio နှင့်အခြား Dalet ဖြေရှင်းချက်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.dalet.com/platforms/brio.
Dalet ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများတူးမြောင်း + (အများပြည်သူထုတ်လွှင့် (ဘီဘီစီ, CBC, ပြင်သစ်တီဗီ, RAI, RFI, ရုရှားယနေ့ RT ကိုမလေးရှား, SBS ရဲ့သြစတြေးလျ, ဗွီအိုအေ), စီးပွားဖြစ်ကွန်ရက်နှင့်အော်ပရေတာများအပါအဝင်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးရာပေါင်းများစွာမှာကမ္ဘာတဝှမ်းအသုံးပြုကြသည် , FOX, MBC ဒူဘိုင်း, Mediacorp, Mediaset, လိမ္မော်ရောင်, ပဋိညာဉ်စာတမ်း Spectrum, Warner Bros, Sirius XM ရေဒီယို) နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (ဗြိတိန်ပါလီမန်က, နေတိုး, ကုလသမဂ္ဂ, စစ်ပြန်ရေးရာ, နာဆာ) ။
Dalet, အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.dalet.com ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Dalet Dalet Brio Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ip SJGolden - SMPTE ST 2110 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် virtual reality 2019-07-30
ယခင်: AAP မီဒီယာကွန်ယက်ခြောက် Calrec Brio စက်များထည့်သွင်း
နောက်တစ်ခု: စိန်ခေါ်မှုများအဝေးမှရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Post-ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သူပုန်ရေယာဉ်စုမွေးစား Quantum သိုလှောင်